महाकवीका अप्रकाशित कृतिको लेखाजोखानै छैन :: NepalPlus
नगेन्द्र राज शर्मा२०७८ मंसिर ११ गते ६:०३
अमर न्यौपानेको कथन-
महाकवी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाका ६ वटा महाकाब्य छन् । ति प्राय सबै पढेको छु । दुई दर्जनभन्दा बढी खण्डकाब्य छन् । ६०० भन्दाबढी कविता छन् । दुई वटा निवन्ध संग्रह । एउटा प्रवन्ध संग्रह ।
त्यसपछि एउटा उपन्यास र एउटा कथा संग्रह । प्राय धेरै चाहिं मैले पढेको छु । उहाँको किताबहरु लेखनाथ पौडेलसित तुलना गरेर पढ्थें । स्नातक र स्नातकोत्तर पढ्दा विशेष गरि उहाँका किताबहरु पढें । त्यो बेला लेखनाथ पौडेलसित तुलना गर्नुको एउटा कारण छ । म सानो छँदाखेरिनै बाले तरुणतपसी, सत्यकली संवाद लालित्य भाग एक र भाग दुई, ऋतु बिचारहरु पढिरहनुहुन्थ्यो । त्यसैले स्कूल पढ्दादेखिनै लेखनाथका कविताबाट म परिचित थिएँ । ति कविताहरु वगैंचाका फूल जस्ता लाग्थे । एकदमै काँटछाँट गरेर मिलाइएको ।
अनि देवकोटाका पढ्दा चाहिँ कस्तो भने ठूलो जंगल जस्तो । जहाँ पढ्न गाह्रो । हिँड्नपनि गाह्रो । कतिपय कुरा त पहिचान गर्नपनि गाह्रो । हामी जंगलमा सबै रुखहरु चिन्दैनौं । यि केका रुखहरु होलान् जस्तो लाग्ने । त्यहाँका सबै चराहरु चिन्दैनौं । त्यहाँका सबै जनावरहरुपनि चिन्दैनौं । त्यस्तै देवकोटाको लेखनपनि विशाल लाग्छ । र त्यहाँका कतिपय कुराहरु बुझ्नपनि कठिन हुन्छ । अलिकति जंगल जस्तै भएकोले ति एकदम परिमार्जित नभएका हुन् कि ? तिनलाई छिचोल्न गाह्रो भएको जस्तो महसुस मलाई भएको थियो त्यतिखेर पढ्दा । अहिले पून: अध्ययन गर्दा कस्तो लाग्छ त्यो चाहिं म भन्नसक्दिन ।
अनि लेखनाथ सँगसँगै मैले किन दाँजिरहेको भने लेखनाथको पढ्दा चाहिं एकदम सुन्दर वगैंचामा बसेको जस्तो । एकदम फूलवारीमा बसेको जस्तो । ति फूलपनि गमलामा सजाएको जस्तो । त्यहाँका रुखलाईपनि डिजाईन झिकेर काटिएको जस्तो । भुइँको दुबोपनि राम्रोसित मिलाएर काटिएको जस्तो सुन्दर लाग्ने । उहाँले आफ्नै किताब ऋतुबिचारपनि सायद तिन चोटी परिमार्जन गर्नुभएको थियो । साना साना कुरापनि परिमार्जन गर्ने । त्यो गुण हाम्रो माधव घिमिरेमा थियो ।
देवकोटाले दोहोर्‍याएर हेर्नुहुन्नथ्यो । तर बालकृष्ण शम पचासौं पटक दोहोर्‍याउनुहुन्थ्यो । माधव घिमिरे त दोहोर्‍याएको दोहोर्‍याइ । आजित नभएसम्म दोहोर्‍याएर बस्नुहुन्थ्यो । एउटा गीतपनि पुरा चित्त नबुझिकन उहाँ निकाल्नुहुन्नथ्यो ।
नगेन्द्र राज शर्माका भनाई
ठिक भन्नुभयो । लेखनाथजी चाहिं संस्कृतका महापण्डितहरु माग, दण्डी, कालिदाशको अध्ययनबाट प्रभावित । मैले देखेको त अझ, दशौं पटक परिमार्जन गर्ने बालकृष्ण शम, पचास पटक परिमार्जन गर्ने राष्ट्रकवी माधव घिमिरे । उहाँले दोहोर्‍याई, तेहेर्‍याई, लेखेर चित्त बुझेपछि मात्रै बाहिर लैजाने । देवकोटा आँखा चिम्लेर लेख्ने फाल्ने, लेख्ने फाल्ने । उहाँ धेरै सामान्य कवितापनि छन् । केटाकेटीलाई लेख्या कवितापनि छन् । देवकोटाले दोहोर्‍याएर हेर्नुहुन्नथ्यो । तर बालकृष्ण शम पचासौं पटक दोहोर्‍याउनुहुन्थ्यो । माधव घिमिरे त दोहोर्‍याएको दोहोर्‍याइ । आजित नभएसम्म दोहोर्‍याएर बस्नुहुन्थ्यो । एउटा गीतपनि पुरा चित्त नबुझिकन उहाँ निकाल्नुहुन्नथ्यो । त्यसकारण माधव घिमिरेका थोरै भएपनि राम्रै राम्रा छन् । देवकोटाका अनेक छन्, अनेकथरिकै छन् । सामान्य कवितापनि छन् । त्यो आफ्नो आफ्नो स्वभाव हो ।
देवकोटाका अप्रकाशित कृति अझै थुप्रो छन् । एक डोको छन् । मुद्दा परिराखेको छ कतिमा । पदम प्रसाद देवकोटा उहाँको छोरा हुनुहुन्छ । उहाँसँग थुप्रै छन् । एउटा छोरा त बिदेशतिर हराउनुभएको छ । अप्रकाशित कृति अति धेरै छन् तर ति खेस्रा जस्ता छन् । कुनै अक्षरनै नबुझिने । मसिना अक्षर सिसाकलमले लेखेको । ५०, ६० वर्ष अगाडि लेखेको, कति बुझिने कति नबुझिने । मेहनत गरेर बनाउनुपर्ने पनि छन् । छाप्न लायकपनि छन् । छाप्दैपनि हुनुहुन्छ उहाँहरुले । अप्रकाशित कति छन् त्यसको लेखाजोखानै छैन ।
जे कागज भेट्यो त्यसैमा लेख्ने त्यहिं छोडिदिने । कति हावाले लान्थ्यो । मिल्किएर जान्थ्यो । बढारिएर जान्थ्यो । उहाँको एक दुई डोको कविता त बढारिएरै गयो होला । नोकरचाकरलाई के मतलव । टुक्रा देख्यो बढारेर फालिदियो । उहाँ त अद्भुत हो नी मान्छे, सामान्य मान्छे होइन । अरु कविहरु जस्तो, लेखनाथहरु जस्तो आफूले लेखेको कुरालाई जतन गरेर राख्ने बानी थिएन उहाँको । अरुले जतन गरिदिए, रह्योभने या नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिमा पुग्यो भने उनीहरुले पाएको पो छापे । नत्र त यि महाकाब्यहरुपनि हराउँथे होलान् । त्यस्तो लापरवाह मान्छे ।
मलाई देवकोटासँगको सामिप्यमा रहँदा त्यहि राकाशा खेलेको असाध्यै सम्झना आ उँछ । हामी केटाकेटी खेल्थ्यौं । उहाँपनि आउनुहुन्थ्यो बेला बेलामा । मपनि खेल्छु तिमीहरुसित भनेर । त्यहि संझिन्छु म त । कहिले मेरो आँगनमा त कहिले देवकोटाजीकै आँगनमा । त्यो बेला मेरो र देवकोटाजीको घरको बिचमा एउटा, दुईवटा मात्रै घर थिए । नत्र खेतै खेत थियो । उहाँ कताकताबाट आएको बेला यस्सो साईकल बिसाएर ‘ल मपनि तिमीहरुसित खेल्छु’ भन्नुहुन्थ्यो । भन्नुहुँदैन म उहाँको बुईपनि चढ्या छु होला । चल्दाखेरि, लड्दाखेरि, खेल्दा खेरि । तेलकाशा खेल्दा, धक्काधक्की हुँदाखेरि । जानिजानि होइन खेल्दा । उहाँ केटाकेटी सँगै केटाकेटी भएरै खेल्नुहुन्थ्यो । सधैं होइन, कहिलेकाहिँ ।
देवकोटाले जे कागज भेट्यो त्यसैमा लेख्ने त्यहिं छोडिदिने । कति हावाले लान्थ्यो । मिल्किएर जान्थ्यो । बढारिएर जान्थ्यो । उहाँको एक दुई डोको कविता त बढारिएरै गयो होला । उहाँ त अद्भुत हो नी मान्छे, सामान्य मान्छे होइन ।
मैले चलाउने अभिब्यक्ति पत्रिका र देवकोटासित खासै संवन्ध भएन । देवकोटाले हाम्रो घरमा आएको बेला बा, काकाहरुसित बसेर सुन्नुहुन्थ्यो, सुनाउनुहुन्थ्यो । मान्छेहरु जम्मा हुन्थे । देवकोटा २०१६ सालमै बित्नुभयो । मैले अभिब्यक्ति शुरु गरेको २०२७ सालमा । ममापनि अलिकति साहित्यिक प्रभाव थियो । मेरा अग्रजहरु साहित्यिक भएको हुनाले । पत्रिका निकाल्न रहर लाग्यो, निकालें । ख्यालख्यालमै २११ अंक निस्किसक्यो । मैले जेजति गरें भन्ने ठान्या छु, त्यो भन्दा धेरै बढी मानसम्मानपनि पाइसकें । मेरो अभिनन्दनै गरे । मलाई लाग्छ, म त्यो लायकनै थिईन । म भन्दा अभिनन्दनिय ब्यक्ति अरुनै थिए । मलाई त अलि कुरीकुरी लागिराख्या थियो साँच्चै भन्नुहुन्छ भने ।
रोचक घिमिरे, जगदिश घिमिरे, भैरव अर्याल त्यो बेलाका मेरा साथी थिए । कुरै कुरामा पत्रिका निकाल्ने कुरो चल्यो । त्यो बेला पन्चायती कालमा भएभरका पत्रिका बन्द भए । त्यो भन्दा अगाडि २०१६ सालसम्म बढी अराजकता थियो । दर्ता नगरि निकाल्थे । २०१७ सालपछि दर्ता नगरेका पत्रिकालाई निकाल्नपनि दिएन सरकारले । सेन्सर कडा भयो । अञ्चलाधिशबाट पास गराउनुपर्थ्यो । र एउटा दुईवटा पत्रिका भानु, रचना, रुखरेखा मात्रै थिए । पत्रिका दर्ता गर्न मलाई त केहि समस्या थिएन । किनभने नेपालमा सोर्स भएपछि जेपनि हुन्थ्यो । त्यो बेला मेरो एक जना साथीको बुवा विश्वमणी अञ्चलाधिश हुनुहुन्थ्यो । मेरो राम्रै चिनजान थियो ।
साथीभाईबिच कुराकानी हुँदा एक दिन ‘मैले पत्रिका निकाल्न चाहें भने दर्ता हुन्छ’ भनेर गफ हाँकें । मलाइ त समाते साथीहरुले ‘ल दता गर । तँ चलाउँदैनस् भने हामी चलाउँछौं’ भन्न थाले । नभन्दै मैले गएर एक दिन मेरो साथीलाई ‘एउटा पत्रिका निकाल्नुपर्‍यो, बुवालाई भन्देउन’ भनेको त बुढाले सुनिराख्या रैछन् । बुढाले ‘केरेकेरे तिमी पत्रिका निकाल्ने ? तिमीलाई कांग्रेसले उचाल्यो कि क्याहो ?’ भने । ‘कहाँ कांग्रेसले उचाल्ने ? हामी राजभक्त मान्छे । साहित्य सेवा गर्न खोज्या । पाएदेखि हुन्थ्यो’ भनें । ‘ए ल भलानोलाई भन्दे, पत्रिका निकाल्न, पत्रिका निकाल्न रहर गर्‍या रैछन्’ भने र पत्रिका त्यसरि सजिलै दर्ता भयो ।
दर्ता भएपछि एक दुइ वटा निकालें । जति निकालें रहर जाग्दै गयो । त्यो बेला म लेखक त थिएँ । मेरा एक दुइ वटा किताब त निस्किसकेका थिए, उपन्यासहरु । तर मलाई लेखक ब्यक्तित्वले भन्दा सम्पादक ब्यक्तित्वले महत्व पाएजस्तो लाग्यो । सबैले ‘सम्पादकज्यु’ भन्ने, ‘मेरो छापिदिनु न’ भन्ने ।
पत्रिका चलाउन अञ्चलाधिशले दर्ता गरिदिनुपर्थ्यो । मेरो साथीको बुवा अञ्चलाधिश थिए । मैले गएर एक दिन मेरो साथीलाई ‘एउटा पत्रिका निकाल्नुपर्‍यो, बुवालाई भन्देउन’ भनेको त बुढाले सुनिराख्या रैछन् । बुढाले ‘केरेकेरे तिमी पत्रिका निकाल्ने ? तिमीलाई कांग्रेसले उचाल्यो कि क्याहो ?’ भने ।
मेरो कथा छाप्दा एउटा छापिन्थ्यो । मेरो पत्रिका निस्किंदा २० वटा छापिन्थे । बिशौं जनाले मलाई सम्मान दिए । यसो हुँद मेरो लेखक ब्यक्तित्व दबिंदै गयो । सम्पादक ब्यक्तित्व चम्किंदै गयो । सबले रुचाए । मपनि त्यसैमा लहसिएँ । गर्दागर्दै गर्दागर्दै पचासौं वर्ष बिते । मिलिक्क गरेको जस्तो पत्तै छैन । २०२७ सालदेखि अहिलेसम्म ५२ वर्ष भैसक्यो । अहिलेसम्म निकालिराख्या छु । अब मेरो निकाल्ने क्षमता छैन । तरपनि छोड्न मन लाग्दैन । समातिराख्या छु । अब बिस्तार बिस्तारै कसैलाइ जिम्मा लगाउन लाग्या छु । त्यसकारण ख्याल ख्यालमै गरेको कुरो यतिका वर्ष गयो ।
मैलेपनि जागिर खाएँ युनिभर्सिटीमा । म जस्ता मेरा साथीहरु रिटायर्ड भएपछि के गर्न लागे भने कोहि कोहि यस्सो मठमन्दिर धाउने, देउतासेउता पूजाआजा गर्ने, इन्डियन जोगिहरुका प्रवचन सुन्ने । कोहि रक्सी खाएर बस्ने । कोहि तास खेल्ने । यि सबै मैलेपनि नगर्‍या होइनन् । तर मलाई कुनैमापनि रुची लागेन । मलाई अक्षरसँगै खेल्न मन लाग्यो । अक्षरसँगै रमाउन मन लाग्यो । त्यसैमा अल्मलिन मन लाग्यो । मेरो पूजा पाठ, धर्मकर्म सबै त्यहि अभिब्यक्ति भयो । यहाँसम्म आइपुगें ।
मान्छे भन्छन् ‘पत्रिका निकाल्न दुख छ ।’ मलाई चाहिं कहिल्यै दुख भएन । सुखैसुखमा निकालें मैले । अलिकति आर्थिक कठिनाई कहिलेकाहिं परेहोला । त्यस्तो दुखलाई दुख मान्ने हो भने त कुरै छैन । मलाई त दुखका दिन सम्झिंदा खुशि लाग्छ । अहिले सुखको अनुभव हुन्छ । यस्ता दिनपनि बिताएँ मैले भनेर । त्यसकारण आनन्दसँग निकालें । र निकालेबापत मैले जेजति मानसम्मान पाउनुपर्ने त्योभन्दा बढ्दा पाएको छु र म प्रशन्न छु ।